Jamaahiirta Liverpool Oo Dalbaday In Laga Guuro Anfield Oo Ay Sheegeen In HABAAR Ku Dhacay, Garoonka Ay Codsadeen & Jamie Carragher Oo Qayb Ka Ah | Laacibnet.net
HomeWararka Ciyaaraha MaantaJamaahiirta Liverpool Oo Dalbaday In Laga Guuro Anfield Oo Ay Sheegeen In HABAAR Ku Dhacay, Garoonka Ay Codsadeen & Jamie Carragher Oo Qayb Ka Ah
Jamie Carragher ayaa hormood ka noqday codsi ay gudbinayaan taageereyaasha kooxda kubadda cagta Liverpool, kaas oo ku saabsan in inta ka hadhay xilli ciyaareedkan ay ka guuraan garoonkooda Anfield, kaddib guul-darrooyin lix guul-darro oo isku xiga oo loogu xambaariyey.
Liverpool ayaa xilli ciyaareedkan loo diiwaangeliyey rikoodhkii ugu xumaa abid ee garoonkeeda, iyadoo lagaga badiyey lix ciyaarood oo xidhiidh ah, taas oo beddeshay rikoodh layaab lahaa oo muddo saddex sannadood iyo dheeraad ah aan lagaga badinin.
Reds ayaa Anfield aan wax guul-darro ah ku arag muddo 68 ciyaaarood oo horyaalka Premier League ah, laakiin markii uu bilowday sannadkan cusub ee 2021 ayaa waxa kaga yaabsatay Burnsley oo ku garaacday, waxaana ku xigsiisay Southampton, halka Leicester City, Everton, Chelsea iyo Fulham ay iyaguna sii raaciyeen oo si xidhiidh ah ay dhibcaha uga soo qaateen Anfield.
Halka garoonkooda ay niyad-jab kaga jiraan, Liverpool ayaa farxad kala soo laabanaysay kulamadii Champions League ee wareegga 16ka, iyadoo labadii lugood ee RB Leipzig ay ku dheeleen garoonka Puskas Arena ee caasimadda Hungary ee Budapest, halkaas oo marna marti ahaan ay u joogeen, marna loo xisaabiyey in iyaga marti loo yahay.
Habeenkii Arbacada, Mohamed Salah iyo Sadio Mane ayaa iyaguna ka baxay abaartii goolal la’aanta iyagoo kala dhaliyey labada gool ee ay guushu ku raacday kooxdooda.
Sannadkan 2021, Liverpool ayaa hal guul oo kaliya kasoo hoysay kulamadii ay ku ciyaartay garoonka Anfield, halka Puskas Arena ay laba guulood ka keentay laba jeer oo ay ku dheeshay.
Halyeygii Liverpool ee Jamie Carragher ayaa ka mid noqday taageereyaasha kooxda oo bilaabay codsi ‘Petition’ ay ku dalbanayaan in garoonka Anfield ay kooxdu ka guurto inta ka hadhay xilli ciyaareedkan, isla markaana ay u guuraan garoonka Puskas Arena ee waddanka Hungary oo ay ku ciyaaraan kulamada horyaalka Premier League iyo Champions League.
Carragher ayaa soo dhigay bartiisa bulshada codsigan, si taageereyaasha ku xidhan ay iyaguna uga sii qayb-qaataan.
Si dawladdu u eegto codsiga taageereyaasha, waxa loo baahan yahay inay ka qayb-qaataan dad badan, markaas oo sida uu dhigayo sharcigu ay xukuumaddu ku qasbanaan doonto inay ka jawaabto, isla markaana ay tixgeliso haddii ay saxeexaan dad ka badan 100,000 qof.
Liverpool ayaa kulanka ugu soo horreeya ee ay ku ciyaarayso garoonkeeda Anfield waxa uu noqon doonaa April 10 oo ay ku martigelin doonaan kooxdii toddobada gool ka dhalisay ee Aston Villa.